LXQt 1.1.0, kusunungurwa nekuvandudzwa kwakakosha | Linux Addicts
LXQt 1.1.0, kuburitswa nekunatsiridza kwakakosha pakati peiyo mamwe aesthetics anomira pachena
pablinux | 18/04/2022 14:06 | Desks
MunaNovember apfuura, mushure memakore masere ebudiriro, iyo LXQt v1.0. Zvichiri zvinoshamisa kuti software inopedza nguva yakawanda isingasviki v1.0, asi hazvisi izvo zvinoshamisa zvakare; a software seGParted yakamudhura makore gumi nemashanu. Asi izvo zvinowanzoreva chinhu chimwe: kuti software iri mubvunzo yatora nhanho hombe kumberi. Izvo zvakaitika neiyi light graphical nharaunda pakupera kwa2021, uye kubva zvino zvichienda mberi zvinongofanira kuvandudzwa. Munguva yekupera kwevhiki vakakanda Zvikamu LXQt 1.1.0, inova imwe huru update.
Iyo purojekiti inoratidzira, semuenzaniso, kuti muLXQt 1.1.0 iyo faira maneja yakagadziridzwa, iyo ikozvino inotsigira iyo DBus interface, kana tweaks kune mushandisi interface, zvakanyanya kuti madingindira akagadziridzwa. The runyora rwemashoko kwakakosha, uye une zvakatanhamara muchidimbu chinotevera.
1 Pfungwa dzeLXQt 1.1.0
2 Pakati penhau
Pfungwa dzeLXQt 1.1.0
Sezvo kuvandudzwa kwakazara kunoratidza:
LXQt 1.1.0 zvinoenderana neQt 5.15, yazvino LTS vhezheni yeQt5. (Chiteshi chengarava cheQt6 chakatangwa, asi shanduro yakatsiga yeKF6 yaidiwa).
Maneja wefaira weLXQt parizvino anotsigira DBus interface yemutungamiriri wefaira, iyo inoshandiswa nemamwe maapplication (akadai seFirefox neChromium) anodaidza iyo default faira maneja kuratidza mafaera mukati memaforodha kana kuita mamwe mabasa. Mukuwedzera, iyo "Recent Files" sarudzo inowedzerwa kuFaira menyu. Semazuva ese, tsikidzi dzinogadziriswa uye maficha anovandudzwa.
Iyo itsva xdg-desktop-portal-lxqt chikamu inowedzerwa kuLXQt, seyakagadziriswa yekuseri kwe xdg-desktop-portal. Kana yaiswa, mamwe asiri eQt maapplication, akadai seFirefox, anogona kugadzirwa kuti ashandise LXQt file dialog.
LXQt madingindira akagadziridzwa. Dingindira nyowani uye akati wandei mapepa akawedzerwa. Zvakare, kuenzanisa mapaleti eQt anowedzerwa kuti itaridzike inoenderana neQt widget masitaera seFusion.
Inogona kuwanikwa uye kushandiswa muLXQt Chitarisiko Kugadzirisa → Widget Style → Qt Palette.
Iko kushanda kwemabhukimaki muQTerminal kwakagadziridzwa zvakanyanya uye akati wandei (yekare) nyaya mukudonhedza modhi dzakagadziriswa.
MuLXQt Panel, legacy tray icons dzava kuratidzwa mukati meStatus Notifier kana System Tray plugin yaitwa. Izvi zvinobvisa dambudziko renhaka System Tray yaive neauto-hiding panes.
Zvidhori zvematireyi zvine chikamu chekuchaja mukati mazvo zvinowedzerwa kuLXQt Power Manager.
Sarudzo iri nyore inowedzerwa kuLXQt Session Configuration yekuyera yepasirese skrini.
Shanduro dzakawana zvigadziriso zvakawanda.
Uye dzimwe shanduko dzinogona kuwanikwa muLXQt chikamu changelogs
heyi nhau dzezvose, sezviri muLibFM-Qt / PCManFM-Qt, uko org.freedesktop.FileManager1 yakashandiswa kuitira kuti igone kushandiswa mumashandisirwo akadai seFirefox neChromium, kuti muLXQt Panel zvidhori zvekare zvinoratidzwa mukati mechiziviso kana activated system tray plugin, uye kumwe kuvandudza kuQTerminal, simba maneja, LXQt Session, LXImage Qt, LXQt Configuration, LibQtXdg, LXQt Archiver, ScreenGrab kana desktop yekuzivisa UI yakakwenenzverwa.
About Wiki iyo vhezheni itsva ichawanikwa riini mukugoverwa kwakasiyana kweLinux, yekutanga kuishandisa ichave iyo inoshandisa iyo Rolling Release yekuvandudza modhi, seyakavakirwa paArch Linux. Lubuntu, imwe yeakanyanya distros kushandisa LXQt, iri kushandisa v0.17.1 mune yazvino Daily Build, uye hazvigoneke kuti ivo vachasanganisira LXQt 1.1.0 muJammy Jellyfish nekuti ichaburitswa China ichi.
Kune vanofarira isa woga, mabhinari uye kodhi kodhi inowanikwa pa Iyi link. Nekudaro, zvinokurudzirwa kumirira kugoverwa kweLinux kuti uwedzere iwo mapakeji matsva. Sezvatakatsanangura, Arch Linux ichasvika munguva pfupi, nepo vamwe vese vachizofanira kushivirira zvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » LXQt 1.1.0, kuburitswa nekunatsiridza kwakakosha pakati peiyo mamwe aesthetics anomira pachena
AlmaLinux 9 beta yakatoburitswa uye inosvika yakavakirwa paRHEL 9
Kusagadzikana kwakawanda kwakawanikwa muWayland's hotkey maneja